Xildhibaan Mukhtaar ” Fuustadii Biyo ah Sh/dhexe waxay gaartay 200 oo Shalin Soomaali ah dadkana ma awoodaan” – Kalfadhi
Biyo la’aan xoog leh ayaa laga soo sheegayaa degaano katirsan Gobolka Shabeelaha Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya waxaana durba ay saameysay dad ku dhaw 200,000 (laba boqol oo kun oo qof) sida ay sheegayn mas’uuliyiin katirsan Hirshabeelle oo katilya Sh/Dhaxe.
Biyo la’aanta ka jirta Shabeelaha Dhexe ayaa saameyey meelo badan waxaana ugu daran degaano hoos yimaada degmada Mahadaay ee Gobolkaas, Waxaa ugu daran degaanka Biyo Cadde oo ay ku nool dad ka badan boqol kun oo qof sida ay sheegayn mas’uuliyiinta Hirshabeelle, sidoo kale Xoolo tiro badan ayey saameysay Biyo la’aanta Shabeelaha Dhexe.
Xildhibaan Mukhtaar Xassan Tuurre oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in heerkii ugu sareysay ay gaartay biyo la’aanta Shabeelaha dhexe meelo katirsan ku dhufatay, gaar ahaan degaanka Biyo Cadde. “Dad kabadan 200,000 oo qof ayaa wajahay biyo la’aan iyo xoolo aan xisaabkooda la qiyaasi karin, hal booyad oo kaliya ayaa biyo uga qaada Jowhar iyo Mahadaay mana kala gaarto dadka degaanka” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Mukhtaar oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
“Fuustadii Biyo ah waxay gaartay 150 ilaa 200 oo Shalin Soomaali ah, hadii aysan si deg deg ah dadkaan u helin gargaar waxay u dhiman karaan biyo la’aan” ayuu yiri Xildhibaan Mukhtaar Tuurre oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle
Sababta biyo la’aanta keentay ayaa lagu sheegay in degaanadaasi aysan helin roob wnaagsan xiliyadii ugu dambeeyay. Sidoo kale degaanka ayaa la sheegay in uu ku yaalo hal ceel oo aan biyahiisa la cabi karin.” Hal ceel oo kaliya ayaa ku yaala degaanka mana la cabi karo biyihiisa waa qaraar, dadka waa ku shubmayaan Xoolihii ayaa cabi la’a” ayuu hadalkiisa raaciyay Xildhibaan Turre.
Maamulka Hirshabeelle ayaa bilooyin ka hor waxaa uu la daala dhacayay biyo bax iyo fatahaad uu sameeyay Wabiga Shabeelle ee Beladweyne iyo Jowhar, hadana waxaa laga soo sheegayaa biyo la’aan degaanada qaar. Maamulkaan malahan keydad biyo iyo meelo biyo xireen ah oo si dib loogu isticmaalo xiligaan oo kale.
Tababar magaalada Jowhar uga furmay Xildhibaano katirsan Hirshabeelle